विप्लवले पाँच सय ‘टाइमर पिन’ कहाँबाट ल्याए ? – www.agnijwala.com
विप्लवले पाँच सय ‘टाइमर पिन’ कहाँबाट ल्याए ?
नेत्र विक्रम चन्द नेकपाले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्फोट गराउन टाइमर पिन प्रयोग गर्दै आएको सुरक्षा निकायकै दाबी छ। प्रेसर कुकर र सकेट बममा टाइमर पिन जडान गरेपछि तोकिएको समयमै विस्फोट हुन्छ।
जासुसी संयन्त्रले पाएको गोप्य सूचनाअनुसार विप्लव समूहले गत वैशाखमा भारत नाका हुँदै ५ सय टाइमर पिन भित्र्याएको हो। उक्त टाइमर काठमाडौंमा पनि भित्र्याएको सूचना गृहमन्त्रालयले समेत पाइसकेको दाबी गरिएको छ।
सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उसले पटकपटक नेपाल बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सो समूहले बन्दको प्रभाव बढाउन राजधानीका महत्त्वपूर्ण स्थानमा विस्फोट गराउँदै आएको छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले भारतीय नाका हुँदै नेपाल ल्याएका ५ सय ‘टाइमर पिन’ बारे सुरक्षा निकाय बेखबरजस्तै छ।
विप्लव समूहले भारतीय नाका हुँदै भित्र्याएका टाइमर पिन नियन्त्रण लिन गृह प्रशासनले खासै चासो देखाएको छैन। पाँच सय टाइमर सहरी क्षेत्रमा विस्फोट भए जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्छ।
विप्लव समूहले मंगलबार गरेको बन्दमा पनि दुई दर्जन बढी स्थानमा बम फेला परेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेल भन्छन्, ‘विस्फोटक पदार्थ काठमाडौं उपत्यकामै भित्र्याएको भन्ने होइन। यद्यपि यस विषयमा प्रहरीले गोप्य सूचना संकलन गरिरहेकै छ।’